Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem]
1 ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 15th November 2009, 3:36 am
ကျွန်တော့စက်က Acer Aspire 5920g ပါ.. ကျွန်တော့ဆက်မှာ အချို့ ဝင်းဒိုးခွေတွေတင်ရင်..
ှSetup Cannot Contiune ဆိုပြီးစာတမ်းပြပါတယ်.. ပြီးရင် F3 နှိပ်ခိုင်းပြီး Restart ချခိုင်းပါတယ်... အဲလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ်..
သူငယ်ချင်းပြောတာတော့ အခွေကို Sata rate လား.. Integrate လုပ်ရမယ်ဆိုလားဘဲ..အဲဒါလုပ်နည်းလေးသိရင်ပြောပြပေးကြပါဦးခင်ဗျာ..
ကျေူးဇူးတင်ပါတယ်.. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 15th November 2009, 3:54 am
ကို D Man က ဘာ ၀င်းဒိုး တင်တာလဲ မသိဘူး ခင်ဗျ ... XP မဟုတ်ပဲ တခြားဝင်းဒိုးတွေ တင်မှာလား .. ဒါမှ မဟုတ် XP ကို ပဲတင်တာမရတာလားမသိဘူးနော် .. ပြီးတော့ ဘယ်အချိန်ကျရင် အဲဒီ့ စာတမ်းက ပေါ်လာတာလဲမသိဘူးခင်ဗျ .. စစတင်ခြင်းကတည်းကဖြစ်တာလားမသိ ဘူးနော် ... ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတလေ အဲဒီ့လိုဖြစ်တယ်ဗျ ..
3 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 15th November 2009, 4:03 am
kohtet wrote: ကို D Man က ဘာ ၀င်းဒိုး တင်တာလဲ မသိဘူး ခင်ဗျ ... XP မဟုတ်ပဲ တခြားဝင်းဒိုးတွေ တင်မှာလား .. ဒါမှ မဟုတ် XP ကို ပဲတင်တာမရတာလားမသိဘူးနော် .. ပြီးတော့ ဘယ်အချိန်ကျရင် အဲဒီ့ စာတမ်းက ပေါ်လာတာလဲမသိဘူးခင်ဗျ .. စစတင်ခြင်းကတည်းကဖြစ်တာလားမသိ ဘူးနော် ... ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတလေ အဲဒီ့လိုဖြစ်တယ်ဗျ ..
ဟုတ်တယ်အကို စစတင်ချင်းဖြစ်တာ.. စတင်လိုက်ရင်.. Set up Loading ဘာညာတော့ တက်လာသေးတယ်.. ပြီးရင် Format ချဖို့နေရာကိုမသွားတော့ဘူး..
Set up Loading ပြီးတာနဲ့ Setup Cannot Continue ဆိုပြီး F3 နဲ့ထွက်ခိုင်းတော့တာဘဲ အကို.. ကျွန်တော်တင်တာက Xp3ပါ..ပြန်ပြင်ထားကြတဲ့ အခွေပါ..
4 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 15th November 2009, 4:40 am
ကျွန်တော် ပုံလေးပါတင်ပေးလိုက်တယ် အကို.. ကျေးဇူး တင်ပါတယ်..
5 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 15th November 2009, 4:57 am
ကျွန်တော်အထင်တော့ အဲဒါကို Hard disk တပ်ထားတဲ့ကြိုးကို ပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်စေချင်တယ် .. တခါတလေ ကျရင် လွတ်ရင်လည်း အဲလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ .. ကို D Man က IDE cable နဲ့နဲ့တူတယ် .... လောလောဆယ်တော့ တပ်ထားတဲ့ ကြိုးကလေးတွေ ပြန်ပြီးတော့ စစ်ကြည့်ပါဦး .. ဟီး မရရင်တော့ ဆြာ ကီးတွေ လာတာကိုစောင့်လိုက်ဦးနော်
6 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 15th November 2009, 5:45 pm
/-\_††@Cl<3r wrote: ကွန်ပျူတာအသစ်က Hard disk drive က SATA ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီပြဿနာမျိုးက ခဏခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ SATA Controller ကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာဆိုရင် IDE တွေကြောင့်လဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ပထမတစ်ခုက ကိုယ့်စက်ထဲမှာ window တင်ပြီးသားရှိရင် window xp ကို CD ခွေနဲ့ မတင်ပဲ ၊ ကိုယ့် HDD ထဲကို window installation CD တစ်ချပ်လုံးကို copy ဆွဲလိုက်ပါ။ပြီးမှ အဲဒီ့ထဲကနေ install လုပ်ကြည့်ပါ။ KMD မှာတော့ ဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်။ အဲဒါကို clean installation လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာလားမသိဘူး။ ကိုကျော်မင်းတော့ သိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ SATA ဒါမှမဟုတ် IDE တွေရဲ့ Driver တွေကို ကိုယ့် motherboard ရဲ့ modem no: နဲ့တိုက်ပြီး ဒေါလ်းလုပ်ဆွဲပါ။အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီ link မှာပဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ window ကို custom cd disc လုပ်ပြီးမှ install လုပ်ကြည့်ပါ။
အပေါ်မှာပါတဲ့ လင့်တွေမှာ သေသေချာချာ ပုံနဲ့ရှင်းပြထားလို့ နားလည်လွယ်မှာပါ။ ကျနော်လည်း မဖြစ်ဖူးတော့ သေချာမရှင်းပြနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ကျနော်ကတော့ သေသေချာချာ မရှင်းတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုကျော်မင်းတော့ သေချာရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ်။
ကို /-tt@Ck3r ကပို့တယ်နော် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ၊ လာထား..........နောက်တစ်ခါကျွန်တော့်အလှည့်ပဲ..... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ။ ကျွန်တော်လဲ မကြုံဖူးဘူးလို့ မပြောရဲဘူးဗျ ။ အခု အစ်ကိုရေးထားတာနဲ
တင် တော်တော်ပြည့်စုံနေပါပြီ ၊ အစ်ကိုလောက်ကျွန်တော်က မတတ်ပါဘူးဗျာ ၊ ကျွန်တော်က ဟို ယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်ပါဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.] ။ အစ်ကိုပြောတဲ့ KMD ဆိုတာတောင်သေ
ချာသိဘူးရယ် [You must be registered and logged in to see this image.] ။ အခု ကျွန်တော်ပေးတဲ့ လင်ခ့်တွေမှာ ပိုစုံလိမ့်မယ်ထင်တယ် ၊ အဲဒီမှာလဲ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး ။
ဒါက floppy မရှိတဲ့စက်တွေအတွက် အဆင်ပြေလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 28th January 2010, 5:36 pm
အထက်ကပုံအတိုင်း bios မှာ sata mode ကို ပြောင်းလို့ရလား အရင်ကြည့်ပါ။ AHCI > IDE ပြောင်းလို့ရရင်
Windows XP ကို ပြန်တင်ကြည့်ပါ။ မရရင် windows စတင်တဲ့အချိန်မှာ F6 ကိုနှိပ်ပီး sata chipset ရဲ့ driver
ကိုတင်ပေးရပါမယ်။ အဲ့ဒါတွေမှ လုပ်လို့မရင်တော့ Windows Vista, Windows7 တို့ကိုပဲတင်ပီးသုံးပါ။
8 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 28th January 2010, 6:16 pm
cd player က sata ဖြင့်နေရင်လည်း cd ခွေက sata rate ပါမှ တင်လို့ ရပါတယ် laptop အများစု ide ပါပေးမယ့် အချို့ စက်တွေမှာ sata driver ဖြင့်နေရင်လည်း မရပါဘူး အဲဒါလေးကိုစစ်ကြည့် ပြီးပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ
9 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 21st February 2010, 9:43 am
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတော ့ကြုံဖူးပါတယ် ။ Bios ထဲမှာလည်း IDE နဲ့SATA တစ်ချက်လောက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါနော် ။ မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ အခွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ကျရင် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Moviesလေးကိုတင်ပေးပါ့မယ်နော် ။
အခုစာကိုပြင်ပေးထားပါတယ် ။ ပို့စ်တင်ရင် စာလုံးပေါင်းကို သေချာစစ်ပေးပါ ။ စာရိုက်ရင်လည်း Space ခြားပြီးရိုက်ပေးပါ ။ ဖတ်တဲ့လူလည်း အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ ။
Last edited by samurai on 21st February 2010, 12:33 pm; edited2times in total
10 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 21st February 2010, 1:13 pm
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက နောက်ပိုင်း Laptop တွေက SATA HDD , SATA DVD drive တွေပါ
ဒါပေမယ် BIOS က ကြားကနေ ပြန်ပီး convert လုပ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ SATA mode ကို မှ ပြောင်းပေးတယ်
driver တွေက BIOS နဲ့ OS အကြားမှာအလုပ်လုပ်တာပါ။ BIOS ကနေမှတဆင့် Chipset တွေကို ပြန်ပီး
အလုပ်လုပ်စေတာပါ ဒါကို ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ လုပ်လို့ရတဲ့စက်တွေလည်းရှိနေတာ။ Acer laptop အများစု
နောက်ပိုင်းလာတဲ့ စက်တွေမှာ အဲ့ဒါတွေပါတယ်။ တခြား laptop တွေမှာ မပါတာများတယ်။ AHCI က SATA ကို
ပြန်အဆင့်မြင့်ထားတဲ့ chipset ပါ။ BIOS က AHCI , IDE mode ကို ပြောင်းပေးတာက hardware အနေနဲ့
သုံးသလိုမျိုး ဖြစ်အောင် ကြားကနေလုပ်ပေးတာပါ။ နောက်တစ်ခုက DOS ခေတ်ကသာ CD Drive Device Driver ကို
တင်ပေးရတာပါ အခုအဲဒီလိုမျိုး လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ OS တွေမှာ ပါရင်ပါ မပါရင် အဲ့ဒီ Drive တွေမှာပါတဲ့ firmware က သူဘာသာသူ auto တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် BIOS က auto detect ဖြစ်ရင် ရပါတယ်။
11 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 3rd March 2010, 12:08 pm
ဝင်းဒိုး တင်မရတာဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟက်ဒစ် ကြိုးများကို သေချာအောင်တတ်ဆင်ပါ။
တစ်ခါတစ်လေ floppy (A) ကိုဖြုတ်ခိုင်းတတ်ပြန်ပါတယ်။ cd drive မကောင်းတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင် သလို
အခွေမကောင်းတာကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ms ပလက်ဖောင်းမှာ အမြင့်ကနေ အနိမ့်ဆင်းမရ ပါဘူး။ ဝင်းဒိုးခွေ
12 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 4th March 2010, 9:54 am
ကို kyawzwathant ပြော သလို
bios မှာ sata mode ကို ပြောင်းလို့ရလား အရင်ကြည့်ပါ။ AHCI > IDE ပြောင်းလို့ရရင်
ကျနော် လည်း ဖြစ် ဖူးတယ်
ACER laptops bios ကို update လုပ် လိုက် တာ AHCI ကို ပြောင်း သွား တာ မသိလိုက် ဘူး
window က မတက် တော့ ပါ။
boot cd လည်း run လို.မရ ဖြစ်နေတာ
နောက်ဆုံး bios တင်ပြီးမှဖြစ်တာ ဆို တာ စဉ်းစား မိပြီး ရှာ တော့ မှ AHCI ကို ပြောင်း နေတာ တွေ.ပါ တယ်။
IDE လို. ပြန် ပြောင်းပြီး မှ window ပြန် တက် ပါတော့ တယ်။
acer ချင်း တူနေတော့ အဲ လို ဖြစ် သလား လို.ပါ။
13 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 6th March 2010, 6:52 pm
i think you need to check your HD or ROM..... i think you need to change your HD or ROM if you have extra pls try again it..... don't mind for my idea.... i am not good in computer knowledge so so...
14 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem] on 24th April 2010, 3:39 pm
အပေါ်က အစ်ကိုတွေပြောသလို IDE တို့ HDD တို့ကြောင့် ဘာညာတော့်မသိဘူး။ ကျွန်တော်ဖြေရှင်းလို့ အဆင်ပြေသွားတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြချင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်က Window ကို Vista တင်ထားတာ အဲဒါကို XP ပြန်ပြောင်းတင်ချင်တာ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ အစ်ကို error တက်သလို တက်တော့တာပဲ။
ကျွန်တော်အရင်တင်ထားတဲ့ Vista Extreme Edition အခွေကို ထည့်ပြီး boot တက်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ partition ပိုင်းတဲ့ အထိ ရောက်အောင်အဆင့်ဆင့် [You must be registered and logged in to see this image.] သွားပါတယ်။
အဲဒီမှာ အရင်ခွဲ ထားတဲ့ partition တွေကို delete, format and create လုပ်မှာလားလို့ မေးပါတယ်။
အရင် က လုပ်ထား တဲ့ partition တွေကို delete လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့် Vista Extreme Edition အခွေကို ပြန်ထုတ် လိုက်ပြီး ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ window ခွေကို ထည့်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက partition magic, Boot တက်တဲ့ အခွေနဲ့ boot တက်ပြီး HDD ကို format ချပြီး ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ widow ကို တင်လိုက်ရင် လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။
စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: ဝင်းဒိုးတင်မရလို့ပါ.. [Problem]